ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ဘဝထဲမှ "Buffer" ဘတ်ဖာများ .....
စာကြည့်စားပွဲပေါ်က စားပွဲတင် မီးဆလောင်းလေး ၏အလင်းရောင်သည် သူ့ အခန်းလေးထဲသို့ အေးအေးက လေး ဖြာကျနေသည်။ အခန်းလေးတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေ၏။ စာဖတ်ရတာ ကြာတော့ ပျင်းလာပြီ။ ဖတ်နေ သော စာကလည်း ခပ်မြန်မြန်မောင်းနေတဲ့ ဘတ်စ် ကား ပေါ်က မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေလို မြင်သာ မြင် နေရသည် ဘာတွေ မှန်းမသိ။ တစ်ကြောင်းပြီး တစ်ကြောင်းသာဖတ်ပြီးသည်။ ခေါင်းထဲ ဘာမှ မဝင်။ စာတစ် ကြောင်းကို သုံးခါလောက်ပြန်ဖတ်ရမှတော့ ရှုတ်ထွေးပွေလီလှသော ဒီစာတွေဘယ်လို ခရီးရောက်ပါ့မည် နည်း။ တိုးသက်သက်ဖွင့်ထားသော ဂီတသံက လွင်လွင်ကလေး ညင်သာစွာကြားနေရသည်။ စာဖတ်တဲ့အခါ Classical ဂီတကို နားထောင် နေကျဖြစ်သည်။ ကော်ဖီခွက်ကလေးကတော့သူ့ ကို ငြိမ်သက်စွာ အဖော်ပြု နေ သည်။ ကော်ဖီခွက်ပေါ်မှ သစ်ပင်လေးတွေက ဂီတ သံနှင့်အတူ ယိမ်းနွဲ့ နေသလို ထင်မိသည်။ ကော်ဖီကတော့ စာဖတ် ရင်း၊ သောက်ရင်းလုပ်နေ သော သူ့ ကို အေးစက်စွာ စောင့်ဆိုင်းနေလေသည်။
သူ ဖတ်နေသော စာမှာ လူကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ Buffer system အကြောင်းဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဇီဝဖြစ် စဉ်များ ကောင်းစွာ ပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့ ရန်အတွက် pH ... (power of Hydrogen ion) ဟိုက်ဒရိုဂျင် အိုင်းယွန်း အရေ အတွက်၊ အပူချိန် ၃၇ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ်စ် အစရှိသည့် မျှခြေတစ်ခု လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ခန္ဓာ ကိုယ်တွင်း အက်ဆစ် ဓါတ်သိပ်များလာ လျှင်ဖြစ်စေ၊ အယ်လ်ကာလီဓါတ်သိပ်များလာလျှင် ဖြစ်စေ ခန္ဓာ ကိုယ် တွင်း ဇီဝ ဖြစ်စဉ်များ ကမောက်ကမ ဖြစ်ကာ ရောဂါ ဝေဒနာများဖြစ်ပွားလာနိုင်သည်။ သို့ ကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်အ တွင်းရှိ pH၊ အပူချိန် အစရှိသည်တို့ ကို စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြင့် သဘာဝ အလျှောက် ထိန်းသိမ်းထား သည်။
အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ရာကြောင့် ထို မျှတနေခြင်း (Equilibrium) ပျက်သွားပါက ခန္ဓာကိုယ်မှ သဘာဝ အလျှောက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ အလိုအလျှောက်ပြုလုပ်လျှက် သူလိုအပ်သော မျှခြေအနေအထား ရောက် အောင်ပြန်လည်ထိန်းညှိ ယူသည်။ ထိုကဲ့သို့ ထိန်းညှိပေးရန်အတွက် Buffer ဟူသော ဒြပ်ဝတ္တုများ ခန္ဓာကိုယ် တွင်းတွင် အမြောက်အမြားရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ကာကွယ်မှု ယန္တရား တစ်ခုဟု လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ စာဖတ်ရသည် ကို ပျင်းရိလာပါက အတွေးတွေ သူ့ ခေါင်းထဲသို့ တရစပ်ဝင်လာမြဲဖြစ်သည်။ ယခုလည်း အတွေးတစ်ခု သူ့ ရင်ထဲ သို့ ချဉ်းနှင်းဝင်ရောက်လာလေ၏။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းစီးဆင်းလှည့်ပတ်နေသော သွေး၏ pH သည် 7.4 (+ or - 0.05) ဖြစ်သည်။ 0.05 ပိုများနိုင်သည် (7.45)။ လျော့သွားနိုင်သည်(7.35)။ ထိုထက်ပိုပြီး များသွားနည်းသွားလျှင် ခန္ဓာကိုယ်ဇီဝဖြစ်စဉ်များ ကမောက်က မ ဖြစ် လျှက် ရောဂါဝေဒနာများ ဖြစ်ပွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ပထမဦးဆုံး ရောက်လာသူမှာ Buffer များဖြစ် သည်။ အက်ဆစ်ဓါတ်များလာပါက ထိုဒြပ်များလျော့သွားစေရန် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘေးမဖြစ်စေရန် Buffer များက ထိုအက် ဆစ်ဓါတ်များကို လျော့ကျသွားစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ အယ်လ်ကာလီဓါတ်များ များနေ ပါက လည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ဥပမာဆိုရသော် ဟင်းတွေမငန်စေရန် လိုအပ်သောဆား ကို တိုင်းဆမြည်းမြပြီး ထည့်တတ်သော့ စားဖိုမှူးကြီးနှင့်လည်းတူသည်။ မီးအားအတက်အကျကို အလိုအ လျှောက် ထိန်းညှိပေးသော Auto regulator မီးအားထိန်းညှိစက် နှင့်လည်း တူ၏။
သူတို့ အိမ်တွင် အမေသည် Buffer ဖြစ်သည်။ အဖေနှင့်သူတို့ မောင်နှမများ အကြား၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အကြား ဖြစ်လာသမျှသော ကတောက်ကဆ များ၊ နားလည်လွဲမှုများ၊ ကို ကောင်းစွာထိန်းညှိပေးနေသူ ဖြစ်သည်။ ကိုကို အရက်သောက်သည်ကို အဖေ ကလုံးဝမကြိုက်။ ကိုကိုက တစ်ခါတစ်ရံ လူမှန်းမသိအောင် မူးမူးပြီး ပြန်လာ တတ်သည်။ ကိုကို အရက်သောက် ဒေါင်ချာစိုင်းပြီးပြန်လာချိန်တွင် အဖေနှင့်တိုးပါက သေချာပေါက် အထိုးခံ ရ မည်ဖြစ်သည်။ ကိုကို ပြန်လာချိန်တွင် အဖေဒေါသကို အပေါက်ဝမှ ရိုက်ချနိုင်သူမှာ အမေသာဖြစ်သည်။ အမေ သာ မရှိလျှင် ကိုကို သည် အဖေ့လက်ချက်ဖြင့် သေလောက်ပြီဖြစ်သည်။ သားသမီးများ နှင့် လင်သားကြားတွင် ရှိသော ပတိပက္ခ မှန်သ မျှ အမေ့ကြောင့် ကြီးရာမှ ငယ်သွားသလို ငယ်ရာမှ ပပျောက်လို့ သွားရစမြဲဖြစ်သည်။ ကိုကို သူနှင့် ညီမလေးတို့ ကြားတွင်လည်း အမေ့၏ မျှတသော မေတ္တာနှင့်အတူ သင့်လျှော် သော ဖျောင့်ဖျ သွန် သင်မှုများ ဖြင့် တည်ငြိမ် အေးချမ်းနေသော မောင်နှမများ၏ ဆက်ဆံရေး ဖြစ်တည်လာ သည်။ သူတို့ မိသားစု သာယာချမ်းမြေ့ နေခြင်း၊ မောင်နှမချင်း ချစ်ခြင်းတို့ သာ ဖြစ်တည်နေခြင်းသည် အမေ့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူ တို့ မိသားစု ကြီးသည် လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုသော် အမေသည် Buffer ဖြစ်သည်။ မိသားစုကြီး တည် ငြိမ်အေး ချမ်းစွာ လည်ပတ်ဖို့ အတွက် အမေ့ အလိမ္မာတွေသာ မပါခဲ့ရင် အဖေနဲ့ သားတွေကြားတွင် အမြဲတစေ တပူပူ တဆူဆူ မငြိမ်းမချမ်း ဖြစ်နေမည်။ တခြားသော မိသားစုများတွင်လည်း ထိုကဲ့သို Buffer နှင့်တူသော အဖေ၊ အမေသို့ မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်တော့ ရှိကောင်းရှိနေမည် ဟု သူတွေးသည်။ ထိုမိသားစုကြီးသည် အမေ့ ကြောင့်ဖြစ်စေ မိသားစုတစ်ခုလုံးချစ်ကြသော သား သို့ မဟုတ် သမီးအငယ်ဆုံးလေးကြောင့်ဖြစ်စေ အကြီးဆုံး အစ်ကိုကြီး အစ်မကြီး များကြောင့်ဖြစ်စေ တည်ငြိမ်ပကတိ ချမ်းသာစွာရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ အဖေ့မျက်နှာညိုနေ လျှင် အမေသိသည်။ ကိုကို စသော သူတို့ မောင်နှမတွေ မျက်နှာမကောင်းလျှင် အမေသိသည်။ သူတွေ့ ဖူးခဲ့ သော ဘဝထဲမှ ပထမဦးဆုံးသော Buffer သည် သူ့ ချစ်လှစွာသော အမေဖြစ်သည်။ သူတို့ မိသားစု လေထု က လေးသည် အမေ့ကြောင့် ငြိမ်သက်နေသည်။ နွေးထွေးအေးမြနေသည်။ ရနံ့ သင်းသင်းလေး ကြိုင်နေသည်။ ရယ် သံမောသံလေးတွေ လွင်နေသည်။
ဇာနည့်ကို စခင်မိတော့ သိပ်ပျော့ညံ့လွန်းသည်ဟု သူထင်ခဲ့မိသည်။ ယောကျာ်းဖြစ်ပြီး မာနမရှိဘူးဟုထင်ခဲ့မိ သည်။ အားနာတတ်လွန်းသည်ဟု စိတ်ထဲမှ ကော နှုတ်မှပါ စွတ်စွဲခဲ့ဖူးသည်။ သူ တို့ သူငယ်ချင်းလေးယောက် အဆောင်မှ အခန်းငယ်တစ်ခုကို အမှီပြုရင်း ပညာသင်ခဲ့ကြသည်။ လူငယ်တို့ ထုံးစံအတိုင်း ထစ်ကနဲ စိတ်မတွေ့ တိုင်းဆိုကြပြောကြ ထိုးကြကြိတ်ကြ ခဏခဏ ဖြစ်သည်။ သူ သတိထားခဲ့မိချိန်တွင် သူတို့သူငယ်ချင်းလေး ယောက် သည် အလွန် ချစ်ခင်နေကြပြီဖြစ်သည်။ သူ ကိုယ်တိုင်လည်း သူငယ်ချင်းများကို အိမ်က ကိုကို့ ထက်ပင် ချစ်သည်။
သူတို့ အခန်းငယ်၏ လေထုသည် ဇာနည့်ကြောင့် လန်းဆန်းလာခဲ့သည်။ အနစ်နာခံတတ်သည်။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်စီ၏ ဝမ်း နည်းမှု ကြေကွဲမှု ပျော်ရွှင်မှု လွမ်းဆွေမှုတိုင်းကို ကိုယ်ချင်းစာ နားထောင် တတ် သူဖြစ် သည်။ အလျှော့ပေးတတ်သူဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်တတ်သူ ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများအကြား စကား ကုန်မကူး တတ်သူဖြစ်သည်။ မျှတစွာဝေဖန် တတ် သူဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာ ထိန်းညှိတတ်သူဖြစ်သည်။ ရှေးရှေး က တစ် ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ငြူစူစောင်းမြောင်းတတ်ကြသော သူငယ်ချင်းများသည် ဇာနည့်၏ ထိန်းညှိပေး မှု တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ လာကြသည်။ နားလည် မှုတွေ ဝေဝေဆာဆာရလာကြသည်။ လူတစ်ယောက်ကို တစ် ယောက် နားလည်ခြင်းသည် ထိုအရပ် ထိုနေရာ ထိုအိမ် တို့ တွင် သာယာမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ချစ်ခင်မှု လေးစားမှု ကို ပွားစေသည်။ ဇာနည်သည် သူတို့ သူငယ်ချင်း လေး ယောက် အတူရှိနေချိန်တွင် Buffer တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သူတွေးမိ၏။
အလုပ်ရှင်သူဌေးနှင့် ဝန်ထမ်းများကြားတွင် ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်လိမ္မာသော မန်နေဂျာသည် ထိုအလုပ် ပတ် ဝန်း ကျင်၏ Buffer ဖြစ်၏။ နိုင်ငံနှစ် နိုင်ငံအကြားတွင် စကားလိမ္မာသော သံတမန်သည် Buffer ဖြစ်၏။ မင်းနှင့် ပြည်သူ အကြားတွင် ပညာရှိသော အမတ်လိမ္မာသည် Buffer ဖြစ်၏။ Buffer နှင့်အလား သဏ္ဌန် တူသော ဂုဏ် သတ္တိတူသော လူသားများကို မြင်ယောင်ကြည့်နေမိသည်။ Buffer ပျက်လျှင် ခန္ဓကိုယ်ပျက်မည် ... ဖောက်လွှဲ ဖောက်ပြန်ဖြစ်မည် .. ကမောက်ကမ ဖြစ်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ကတိမ်းကပါးဖြစ်မည် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်မည်။ လောင်မြိုက်မည်။ ပျက်ဆီးမည်။ ပြိုကွဲမည်။
တကယ်တော့ Buffer များမှာ လူ့ လောကကို အကျိုးပြုသူများသာ ဖြစ်သည် ဟု သူ့ အမြင်တွင် ရှင်းရှင်းမြင် လာသည်။ Buffer တွေကို တန်ဖိုးထားသင့်သည် လေးစားသင့်သည်။ အများအကျိုးပြုလျှင် ကိုယ်မနစ်နာဘဲ နှင့်တော့ အောင်မြင်မှုနည်းပါးနေမည်ဖြစ်သည်။ Buffer များသည် အနစ်နာခံသူ များ ဖြစ် သည်။ အများအကျိုး ကြည့်သူများဖြစ်သည်။ အပြုံးဖြင့် ပီတိဖြစ်သူများဖြစ်သည်။ ငြိမ်းအေးသော အရိပ်ကို ပေးသူများဖြစ်သည်။ သာ ယာသော ဝန်းကျင်ကို ဖန်ဆင်းသူများဖြစ်သည်။
သူ နှင့် သူ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် တွင် သူ သတိ မပြု မိခဲ့သော Buffer များ မည်မျှရှိနေပြီနည်း။ Buffer နေရာယူ လျှက်က နေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်ဆီးသော သူများလည်း မြင်လာသည်။ ကောက်ကျစ်သော သူများ လည်း သူ့ အတွေးတွင်ပေါ်လာသည်။ Buffer များမရှိလျှင် ပျက်စီးတတ်သလို Buffer အမျိုးအစား ညံ့ဖျင်းလျှင် လည်း ပျက်စီးတတ်သည် Buffer တွေနည်းနေပါကလည်း ပျက်စီးတတ်သည်။ Buffer သည် ဖြောင့်မှန်သော သူဖြစ်သည်။ ဇွဲကောင်းသောသူ ဖြစ်သည် ပျော့ပျောင်းညင်သာ သူများ ဖြစ်သည်။ ဥာဏ်ကြီးသူများဖြစ်သည်။ ကြီးရင့်သော စိတ်ထားရှိသူများဖြစ်သည်။ ထိုအရာများ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သော် ...............။
သူ Buffer နှင့်တူသောသူ ဖြစ်ရဲ့ လား .... ထိုမေးခွန်းကို သူ့ ကိုယ်သူ မေးကြည့်မိသည်။ Buffer..... Buffer ..... သူသည် လူအများ၏ ပြုံးပျော်ရွှင်မှုကို ပေးနိုင်သောသူ ဖြစ်ရလို၏ .... သူ့ လက်တကမ်း မိသားစု၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ
သည် ထိုထက် ထို့ ထက် ကျယ်ပြောသော လောကကို အလှဆင်သူ ဖြစ်လို၏ ..... အတ္တတွေလျှော့ပါးကာ ပရ တွေ မျှတဖို့ အရေး .... ကြိုးစားအားသစ်ချင်လာသည်။ သူ တွေးရင်းပီတိဖြစ်ရသည်။ လူတိုင်း လူတိုင်းသည် Buffer ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သူထင်မိသည်။ ..... လောက တွင် Buffer များတိုးပွားပါစေ ........ သူ့ စိတ်ထဲမှ တီးတိုး ရေရွတ်လိုက်၏ .... သူ ပြဌာန်းစာအုပ်ကို ပိတ်လိုက်သည်။ ညကား ကောင်းစွာ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပြီဖြစ်၏ .......... ။
ပုံလေးကို ဒီက ယူပါတယ် .... :D
စာဖတ်လည်လာ မိတ်သဟာ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ......
Posted by yangonthar at 2:15 AM
Labels: ဝတ္ထုတို, အတွေး, ဆောင်းပါး
အောင်မလေး ကိုရန်ကုန်သားဆီမှာ တခါမှ ၁ မရဖူးမှတ်တာ နာတစ်ကွ။ အဟိ
ဒီလိုရတုန်းလေး ၂ လည်းယူမယ်ဗျာ။ အဟိ
၃ လည်း လိုချင်သေးတာပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပ အဟိ။
ထင်တောင်မထင်ဘူး။ အိပ်ခါနီးလေး ဘလော့ဖွင့်ရကျိုးနပ်သွားတယ်
အဟန့် အတည်မန့်ဖို့ အစိန်ဖတ်ပါတော့မယ်ရှင်။
တကယ်ဖတ်ပြီနော်။ ပြီးမှ အကျိုးအကြောင်းလေး မန့်တော့မယ် အဟိ
အင်း စာရေးတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ ဗဟုသုတ ရသွားပြီ။ ပါးလုံးလည်း Buffer ဖြစ်ချင်တယ်။ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပေးးသွားတာကို သဘောကျမိတယ်။
အဲ မေ့တော့မလို့ ပြန်ပြီနော်။ ပြောဖို့ မေ့တော့မလို့ တာ့တာနော်။
မှတ်သားစရာ ဆောင်းပါးကောင်းလေးကို ဖတ်ချင်စဖွယ်ရေးထားတာ ကြိုက်လိုက်တာ =)
လောက တွင် Buffer များတိုးပွားပါစေ... =)
သူပြောမှပဲ Buffer ဖြစ်ချင်သွားပြီ။း)))
ရေးလိုက်လို့ကတော့ လန်ထွက်နေတာပဲ ရန်ကုန်သားတို့က .... အညာလေသံနဲ့ပြောရရင်
သူများသားသမီးတွေများ တော်ဂျက် .....
နာတောင် Buffer တွေကို အားကျလာပြီ တစ်ကယ်...
အခုလိုလေး မျှဝေးပေတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီိပိုစ့်လေးကိုလည်း မှတ်သားသွားပါတယ် မောင်လေး။ Buffer ဆိုတာဒီလိုကိုး...... မမ၀ါပြောသလိုပဲ မရောင်တောင် Buffer ဖြစ်ချင်သွားတယ်။ :P
ကိုရန်ကုန်ရေ...Buffer ကို ဖတ်ချင်ဇောနဲ့Buffet အောင်းမေ့ပြီး စားရတော့မယ်လို့ အပြေးလာတာ..ဟိဟိ..ငတ်ကြီးကျပုံများ...အင်း...Buffer တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် စိတ်ဓါတ်တွေကို အရင်ဆုံး ပြင်ကြရမှာပေါ့နော်...ပြင်နိုင်ကျရင် အကောင်းဆုံးပါ..ကာရံလည်း စပြင်နေပြီနော်...Buffet စားရင်း Buffer ဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်တော့မယ်..:P ကိုရန်ကုန် စာကောင်းလေးတွေ အမြဲရေးနိုင်ပါစေကြောင်း........
လောကမှာ Buffer တွေ လျော့နည်းလာတာဟာ မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာပါဗျာ
စာတော်တော်ရေးနိုင်တာဘဲနော်... ရေးတဲ့စာတိုင်းလဲဖတ်လို့ကောင်းတယ်... အားပေးနေမယ်
thanks for reminding me; i remember what i am. :) you are same with me too. :) let's walk together...
ကိုရန်ကုန်သားရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြချက်က အရမ်းကိုပြောက်မြောက်လွန်းပါတယ် ။ မိသားစုတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ Buffer တွေ...ဒီခေတ်ကြီးမှာ နည်းပါးလာတာကတော့ ၀မ်းနည်းစရာ
ပါပဲဗျာ....ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကိုရန်ကုန်သားရေ....ဘ၀နဲ့ဆိုင်တဲ့ အတွေးတပိုင်းတစကို ပေးတဲ့အတွက်ပါ...ရင်ထဲကလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ခံစားမိပါတယ်....
အရမ်းကောင်းတယ်။ အနှစ်အပြည့်ပဲ။ သူများတွေလို ကိုယ်လဲ Buffer ချင်တယ်။ အရင်ကတော့ အဖိုးနဲ့ သူ့သားသမီးတွေ(ကိုယ့်ရဲ့ ဦးလေးအဒေါ်တွေကြားမှာ) ကိုယ်က Bufferပေါ့။ အဖိုးက ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်လေ။ ခုတော့ အဖိုးမရှိတော့ ကိုယ်က Buffer မဟုတ်တော့ဘူး။ ရန်ကုန်သားရဲ့စာကိုဖတ်ပြီး Buffer ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်။
Buffer အကြောင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ဟာ Buffer ကောင်းတစ်ယောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိလာရတယ်.. ဒါပေမဲ့ negotiator ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ်ကြိုးစားနေတယ်.. သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာဖြစ်ဖြစ် မိသားစုတွေကြားထဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတိုရဲ့ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲတွေကို နားထောင်ပေးတဲ့သူ အမြဲလုပ်ပေးခဲ့တယ်... ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့ သူတို့ကိုပဲ ချခိုင်းပီး ကိုယ်ကတော့ သူတို့ပြောချင်တာမှန်သမျှ အားလုံး အားလုံး နားထောင်ပေးခဲ့တယ်.. တခါတလေမှာ အပူတွေ သိပ်များလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ စိတ်ထဲမှာ ရှုပ်လာတာ နာကျင်ရတာတွေ များလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုမှ နားမထောင်ချင်ပေမဲ့လဲ သူတို့မှာက ကိုယ့်ကိုပဲ ပြောစရာလူရှိတော့ နားထောင်ပေးနေရတာပဲ.. ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘက်က ကိုယ့်ကို ပြန်မကြည့်တာက အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ် ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနေနိုင်မလဲ ဘယ်လို စိတ်အနှောင့်အယှက်တွေရှိနိုင်မလဲ ဘာတွေ ခံစားနေနိုင်မလဲ မစဉ်းစားပေးကြတာပဲ.. အဲ့ဒီအကြိမ်ရေတွေ သိပ်များလာတော့ လူတွေကို တဖြည်းဖြည်း စိတ်ကုန်လာတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကြားဝင်စေ့စပ်ဖျန်ဖြေပေးတဲ့သူလုပ်နေတုန်းပဲ .. လုပ်နိုင်အောင်လဲ ကြိုးစားနေတုန်းပါပဲ.. အကိုရန်ကုန်သားပြောသလိုတော့ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်နိုင်တဲ့သူ အနစ်နာခံနိုင်တဲ့သူ Buffer ကောင်းတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး.. ဘာလို့ဆိုတော့ တခါတလေ အတ္တတွေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးကြည့်တတ်လို့လေ :(
နှိုင်းယှဉ်ရေးထားတာလေး အရမ်းကောင်းတယ် ..ဘယ်
နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အေးချမ်းသာယာဖို့ဆိုတာ Buffer
တစ်ယောက်တော့ လိုတယ်လေနော ..
Buffer ကမိုက်တယ် :)
ကျနော်ရော .. အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လို့ ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဗျာ။
အင်း Buffer.... Buffer...
Buffer ဖြစ်ဖို့ အများကြီး... ကြိုးစားရဦးမယ်
အိမ်နဲ့ အဝေးမှာ ကျွန်မစိတ်နဲ့ ကိုယ်ကို ထိန်းညှိပေးသော buffer များမှာ သီချင်းများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် မောင်ငယ်ကဲ့သို့ စာရေးကောင်းသော ဘလော့ဂါများဖြစ်သည်။
ငါ ဘယ်လိုစမ်းရမလဲဟင်။ လာပြောဦး ဟိဟိ
Buffer တွေရဲ့ တန်ဖိုးအကြောင်း အတွေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာကောင်းလေး လာဖတ်သွားပါတယ်
ရေးထားတဲ့စာတွေက လန်းနေတာချည်းပါပဲလား.. အတွေးလည်းလန်း အရေးလည်းလန်း.. ဒီဘလော့ခုမှရောက်ဖူးတာ နာတယ်.....
ကိုရန်ကုန်သား...။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်လည်း စာဖတ်သူနဲ့ ခံစားမှုကြားမှာရှိတဲ့ နှလုံးခုန်မှု အတိုင်းအတာကို ညှိပေးတဲ့ Buffer တစ်ယောက်ပါပဲလားဗျာ...။